रमेश प्रसाइ किन खनिए ? युटुबर कै कारण रो,गिले उपचार, पिडि,तले न्या,य, भो,काले पेट भर्न पाएको बिर्सेछन सायद रमेशले ? (भिडियो सहित) – Complete Nepali News Portal
सामाजिक सञ्जालमा धरानका रमेश प्रसाई नाम निकै नै लोकप्रिय छ । शारीरिक अपाङ्गता भएका उनले सामाजिक सञ्जालमा सामाजिक तथा राष्ट्रिय मुद्दामा आफ्ना विचारहरु राख्ने गर्दछन् । रमेश प्रसाई कविता समेत लेख्ने गर्दछन् । कविता तथा अन्य माध्यमबाट आफ्ना विचारहरु राख्दा आफूभित्रको कु,ण्ठा बाहिर आउने उनी बताउँछन्।
उनी आफु बोल्न कै लागि जन्मेको बताउछन् । समाजमा केहि घटना घट्दा उनी तत्काल आफ्नो विचार राख्ने गर्छन् । रमेश प्रसाइ हाल एक टेलिभिजनमा कार्यक्रम सन्चालन गरिरहेका छन । उक्त कार्य क्रममा एक सन्दर्भिक बिषयमा गहिराइ साथ चर्चा गरिन्छ । उनले एक कार्यक्रममा युटुबको बारेमा केहि बोलेका छन र यो कुराको पुन्य गौतमले बि,रोध गरेका छन, हेरौ भिडियो